श्याम श्रेष्ठ काठमाडाैं, २९ फागुन
कामलाग्दो चिनियाँ अनुभव
एक महिनाअघि ७ फेब्रुअरीका दिन चीनमा एकै दिनमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या ८६ थियो । त्यही दिन २४ घण्टामा ३ हजार ३ सय ९९ जना नयाँ व्यक्तिमा यो रोग सरेको निश्चित भएको थियो ।
आज यो पंक्ति लेख्न बस्दा चीनमा कोरोना भाइरसको प्रकोप धेरैै घटिसकेको छ । एक दिनमा चीनभरमा मृत्यु हुनेको संख्या घटेर ११ जना मात्र हुन पुगेको छ भने २४ घण्टाभरमा केवल १८ जना नयाँ बिरामी थपिएकाे चिनियाँ स्वास्थ्य आयोगले बताएको छ ।
सबै बिरामी डिस्चार्ज गरिएका कारण वुहान शहरमा बनाइएका १४ वटा ठूला मेकसिफ्ट अस्पतालहरू बन्द गरिएका छन् । चीन अब दक्षिण कोरियालाई कोरोना भाइरसविरुद्ध जुध्न अन्य सहायताका साथसाथै ५० लाख थान मास्कसमेत तुरुन्तै दिन सक्ने बिन्दुमा पुगेको छ ।
चीनले करिब डेढ महिनाको प्रयासमा हासिल गरेका यी उपलब्धिले पुष्टि गरेको छ कि कोसिस गरे कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्न सम्भव छ । चीन सरकारले घोषणा पनि गरेको छ– आगामी अप्रिल महिनासम्ममा यो रोग पूरै नियन्त्रणमा आइसक्नेछ ।
कोरोना भाइरसको प्रकोपका कारण चीनले चुकाउनुपरेको मूल्य साधारण छैन । आजसम्ममा कोभिड १९ नाम दिइएको यो भाइरसले चीनभरिमा ३ हजारभन्दा बढीको ज्यान लिइसकेको छ । चिनियाँ भूमिमा कुल जम्मा ८० हजार ७ सय जनाभन्दा बढी मानिसलाई यो रोगले आक्रान्त पारिसकेको छ ।
झण्डै ६ करोड जनसंख्या भएको हुवेई प्रान्तलाई त ‘लक्ड डाउन’ नै गरियो । यो रोगले सबैभन्दा बढी आक्रान्त पारेको हुवेईको राजधानी वुहानमा त लक्ड डाउन अझ धेरै कडी कडाउपूर्ण रह्यो । करिब १ करोड जनसंख्याले आफ्नो घर–कोठाबाट हलचलसमेत गर्न पाएनन् ।
चीनको राजनीतिक राजधानी बेइजिङ, आर्थिक राजधानी साङ्घाईलगायत देशका अधिकांश शहरमा निजी यातायात, सार्वजनिक बस, रेल, उद्योगधन्दा, विद्यालय, शहर बजार, जमघट, भेटघाट, पर्यटन व्यवसाय सबै ठप्प पारिए ।
कैयन् देशबाट चीनमा आउने र चीनबाट कैयन् मुलुकमा जाने हवाईयात्रामाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लाग्यो । कुनै पनि मुलुकमा यति धेरै मानिसलाई एकै समयमा क्वारेन्टाइनमा राखिएको र यति ठूलो मात्रामा आर्थिक गतिविधि ठप्प पारिएको सम्भवतः यो विश्व इतिहासमै पहिलो पटक थियो ।
कस्तो भयो होला त्यो समयमा चीनको जनजीवन ? कसरी धानियो होला डेढ महिना लामो यो क्वारेन्टाइनलाई ? यो घटनाले चीनको अर्थतन्त्रमा निश्चय पनि ठूलो प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।
तर, आफ्नै देशका अन्य भागमा र विश्वमा कोरोना भाइरस नफैलियोस् भनेर चीनले कुनै पनि मूल्य चुकाउन तयार भयो । त्यो भावना ज्यादै नै सराहनीय छ । त्यसका निम्ति यो रोगको नियन्त्रण र रोकथाम गर्ने क्रममा चीन सरकारले जुन ढंगले मानवीय तथा आर्थिक स्रोत, साधन र राज्यसंयन्त्रको परिचालन गर्‍यो, त्यसले पूरै विश्वलाई आश्चर्यचकितसमेत पारेको छ ।
१० दिनमा हजार बेडको साधनसम्पन्न नयाँ अस्पताल निर्माण गरी भ्याउनु विश्वको सबैभन्दा विकसित मुलुक अमेरिकाको पनि बसको कुरा होइन । तर, चीनले विश्वसामु त्यो गरेर देखायो ।
त्यो पनि एक पटक होइन, दुई–दुई पटक । हामी एउटा प्रान्तको एउटा महामारी नियन्त्रणको कामको संयोजन गर्नका लागि कुनै पनि देशको प्रधानमन्त्री स्वयम् लागिपरेको घटना विश्वमा सितीमिती पाउँदैनौँ तर चीनमा त्यस्तो भयो ।
आफ्नो ज्यान माया मारेर प्रधानमन्त्री ली खछाङ आफैँ महामारी नियन्त्रणको सारा कामको मुख्य संयोजनकर्ता र अगुवाका रूपमा अघि सरे । रोग सर्ने र मर्ने हरेक सम्भावना हुँदाहुँदै चीनभरबाट ४० हजार स्वास्थ्यकर्मीहरू हुवेई प्रान्तमा ओइरिए । यो साधारणतया देख्न पाइने घटना होइन ।
महामारी नियन्त्रणका लागि चीन सरकारले गएको डेढ महिनामा नेपालको १ वर्षको पूरै राष्ट्रिय बजेटबराबरको रकम अर्थात् १२ खर्ब ७१ अर्ब नेपाली रुपैयाँ खर्च गर्‍यो, जुन गत ४ मार्चसम्मको खर्चको आँकडा हो ।
चीन अहिले कोरोना भाइरसको खोप पत्ता लगाउन लागिपरेको छ, जसका लागि आवश्यक अनुसन्धान खर्च अलिबाबा, बैडु, टेनसेन्ट र ह्वावैजस्ता धनाढ्य चिनियाँ व्यापारिक कम्पनीले दिएका छन् । बिल गेट्स र टिम कुकजस्ता अमेरिकी धनाढ्यले समेत यसमा सहयोग गरेका छन् ।
यी सबै अनुपमेय प्रयासको कुल योगबाट सोचेभन्दा निकै छिटो कोरोना भाइरसको प्रकोप चीनमा धेरै मात्रामा नियन्त्रणमा आएको छ ।
अहिले आइपुग्दा कोरोना भाइरसको प्रकोप केन्द्र वुहान शहरबाहेक हुवेई प्रान्तका कुनै पनि शहरमा गत ३ दिनदेखि १ जना मान्छेलाई पनि यो रोग सरेको छैन । चीनका कुल ३४ मध्ये २४ वटा प्रान्तमा कुनै पनि नयाँ व्यक्तिलाई कोरोना भाइरस सङ्क्रमण भएको छैन ।
तिब्बत, मकाउलगायत ६ वटा प्रान्त वा विशेष क्षेत्रलाई कोरोना भाइरसबाट पूर्ण मुक्त घोषित गरिएको छ । अहिलेसम्म ८० हजारभन्दा बढी व्यक्तिलाई कोरोना भाइरस सङ्क्रमण भएकाेमा झण्डै ६० हजार मानिस निको भएर घर फर्किसकेका छन् ।
सङ्क्रमितमध्ये मृत्यु हुनेको दर ३.७ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यसको तात्पर्य ९६ प्रतिशत बिरामीहरू या त निको भइसके या निको हुने क्रममा छन् ।
चीनमा अब आर्थिक गतिविधिले फेरि विस्तारै पूर्व रूप धारण गर्न खोजेको छ । खानासम्बन्धी चेन कम्पनी म्याकडोनाल्डले आफ्ना चीनभर रहेका ३ हजार ३ सय रेस्टुराँहरूमध्ये ९० प्रतिशत रेस्टुराँहरू खोलिसकेको छ । त्यस्तै, स्टारबक्स कफीले पनि आफ्ना स्टोरहरूमध्ये त्यति नै प्रतिशत स्टोरहरू सञ्चालनमा ल्याएको बताएको छ ।
विश्वप्रसिद्ध इलेक्ट्रोनिक कम्पनी एप्पलले चीनभर रहेका एप्पल कम्पनीका ४२ स्टोरमा ३८ वटा सञ्चालनमा ल्याएको छ । स्वीडेनको घर सजावट कम्पनी इकियाले आफ्ना ३० मध्ये २७ वटा स्टोरहरू समय तालिका बदलेर खोल्न थालेको छ ।
चीनको कोरोना भाइरससितको युद्धसम्बन्धी अनुभवबाट सम्पूर्ण विश्वले सिक्न आवश्यक छ । चीनमा सुरुमा डाक्टर ली वेनलियाङले गएको डिसेम्बर महिनामै यो नयाँ खतरनाक भाइरस आएको पत्ता लगाइसकेका थिए ।
उनले यो कुरा स्थानीय अधिकारीलाई बताएका पनि थिए । तर, स्थानीय अधिकारीहरूले यो तथ्यलाई ग्रहण गरेर प्रान्तीय तथा केन्द्रीय सरकारलाई सूचित गर्नु तथा आवश्यक उपचारको प्रबन्ध गर्नुको सट्टा उनलाई हकारेर तथ्यलाई दबाए ।
फलस्वरूप चिनियाँ नयाँ वर्ष मनाउन जानेहरूमार्फत् यो भाइरस जनवरी महिनाको अन्त्यतिर तीव्र गतिले हुवेई प्रान्तभर र देशका अन्य भागमा समेत फैलियो । स्थानीय अधिकारीको एउटा भूलका कारण सिंगो मुलुकले ठूलो नोक्सानि व्यहोर्‍यो ।
ती स्थानीय पदाधिकारीलाई अहिले कडा कार्बाही त गरिसकिएको छ तर कोरोना भाइरस पहिलो पटक फैलिन थालेको पत्तो लाउने डाक्टर लीको भने गत ७ फेब्रुअरीमा कोरोना भाइरसबाटै मत्यु भइसकेको छ । उनलाई त्यतिबेला साथ दिने उनका सहकर्मी डा. मेई झोङमिङको पनि ३ मार्चमा देहावसान भएको छ ।
यो चिनियाँ अनुभवले सिद्ध गरेको छ कि कोरोना भाइरस रोगको नियन्त्रणमा सबैभन्दा घातक कुरा हो– तथ्यलाई दबाउनु र बिरामीलाई अरूसित स्पर्श र संसर्गका लागि खुला छाडिदिनु । कोरोना भाइरस सङ्क्रमण हुँदा गरिनुपर्ने पहिलो मुख्य कुरा हो– सङ्क्रमित वा सङ्क्रमणको शंका लागेका व्यक्तिलाई सङ्क्रमण नभइसकेका मानिसबाट कडिकडाउपूर्वक अलग्याउनु । कुनै पनि खालको स्पर्श र संसर्गमा आउन नदिनु ।
यो रोग लागेपछि तथ्य दबाउने होइन, यसलाई अविलम्ब विभिन्न तहका सरकारको जानकारीमा तथा रोगीलाई तुरुन्त अस्पतालमा ल्याउनु आवश्यक छ । यो घरैमा बिरामी राखेर उपचार गर्ने रोग नै होइन ।
कोरोना भाइरसको निश्चित रामवाण ओखती पत्ता लागेको छैन । क्लोरोक्विन फोस्फेट मात्र अहिलेसम्म चिनियाँहरूले प्रयोगमा ल्याएर सफल भएको प्रभावकारी ओखती हो । चिनियाँ अनुभवले देखाएको छ कि कोरोना भाइरस कसैलाई हुँदैमा सबैलाई सर्दैन ।
कुनै पनि कारणले शरीरको प्रतिरोध क्षमता कमजोर भएका व्यक्तिमा, बुढाबुढीमा र पहिले नै शारीरिक रूपमा अस्वस्थ मानिसमा, डाइबिटिज लागेका र रुघाखोकी लागेका मानिसमा यो ज्यादा र चाँडो सर्ने राेग हो ।
त्यसैले ज्वरो, रुघा, खोकी भएका मानिससित कम्तीमा १ मिटर टाढा बस्नु, कुनै पनि खालको स्पर्शबाट बच्नु, शरीरको प्रतिरोध क्षमता बढ्ने खानेकुरा, विशेषगरी भिटामिन सी ज्यादा हुने कुराहरू नियमित रूपमा खानु र कुनै पनि नयाँ कुरा छुनासाथ त्यसले कुनै पनि हालतमा आँखा, मुख र नाक नछुनु बरु हातलाई बारम्बार साबुन–पानीले धुनु यो रोगबाट बच्ने सर्वश्रेष्ठ उपाय हुन् भनेर चिनियाँ अनुभवले देखाएको छ ।
कोरोना भाइरस फैलियो भनेर आत्तिनु आवश्यक छैन । नयाँ मानिससित सम्पर्क हुने सबै बाटो स्वयम् बन्द गरेर, आफैँ आफूखुसी क्वारेन्टाइनमा बसेर यसको प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
फैलँदो कोरोना भाइरस
चीनमा कोरोनाको प्रकोप घट्दै गए पनि अहिले यो प्रकोप चीनमा भन्दा ८७ गुणा ज्यादा चीनबाहिरका देशहरूमा फैलिइरहेको छ । कोरोना भाइरस अब कुनै एक–दुईवटा देशको मात्र समस्या रहेन ।
यो सारा विश्वलाई त्राहिमाम बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय महामारी भएकोे छ । आजसम्ममा चीनबाहेक विश्वका ११४ भन्दा बढी मुलुकका मानिसलाई कोभिड– १९ को सङ्क्रमण भइसकेको छ ।
चीनमा सङ्क्रमणसमेत जोड्ने हो भने त संसारभरको सङ्क्रमितको कुल संख्या १ लाख २६ हजार नाघ्छ । मर्नेहरूको संख्या ४ हजार ६ सय हाराहारी हुन जान्छ ।
चीनपछि सबैभन्दा बढी कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमितहरू इटालीमा रहेका छन् । त्यहाँ सङ्क्रमितको कुल संख्या १२ हजारभन्दा बढी पुगेको छ ।
इटालीमा कोभिड– १९ का कारण अहिलेसम्म ८२७ जनाको ज्यान गइसकेको छ । लोम्वडी शहर र १४ प्रान्तका १ करोड ६० लाख मानिसलाई त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा राखिसकिएको छ ।
तेस्रोमा इरान आउँछ, जहाँ यो रोगबाट सङ्क्रमितकोे कुल संख्या ९ हजार पुगेको छ र ३५४ जनाकाे यसबाट मृत्यु भइसकेकाे छ ।
चौथोमा दक्षिण कोरिया आउँछ, जहाँ ७ हजार ८६९ जनामा यो रोगको सङ्क्रमण भएको छ । अहिलेसम्म यो रोगबाट त्यहाँका ६६ जनाको देहावसान भएको छ ।
स्पेन, फ्रान्स र जर्मनीमा समेत यो भाइरस तीव्र गतिले फैलँदै छ । यीमध्ये हरेक मुलुकमा सङ्क्रमितको संख्या १ हजार नाघिसकेको छ । यी सबै मुलुकमा कोरोना भाइरसले महामारीको रूप धारण गरिसकेको छ ।
विश्वका कुल कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित बिरामीमध्ये ९५ प्रतिशत बिरामी यी ७ मुलुक– चीन, इटाली, दक्षिण कोरिया, इरान, फ्रान्स, जर्मनी र स्पेनमा रहेका छन् ।
पहिलेदेखि अति होसियार संयुक्त राज्य अमेरिकामा समेत यसका कारण २६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने ७५० जनामा यो भाइरस सरिसकेको बताइएको छ । अमेरिकी जहाज ग्राएण्ड प्रिन्सेसमा नै २१ जनालाई यो रोगले छोइसकेको बताइएको छ ।
परिस्थितिको गम्भीरतालाई विचार गरेर अमेरिकी संसदले ८.३ अर्ब डलरको आकस्मिक बजेट कोरोना भाइरससित लड्नका लागि पारित गरिसकेको छ ।
ठूलो जोखिममा नेपाल
कोरोना भाइरसले हाम्रा अधिकांश छिमेकमा पाइला राखिसकेको छ । यो नजिकमा बङ्गलादेश र भारतसम्मै आइसकेको छ । त्यसैले नेपालमा कुनै पनि बखत कोभिड– १९ को प्रकोप भयो भने अचम्म मान्नु पर्दैन । त्यस हिसाबले नेपाल ठूलो जोखिममा छ ।
अमेरिका, चीन र युरोपजस्ता अत्याधुनिक स्वास्थ्यसेवा र प्रविधियुक्त देशलाई समेत अत्याउने सामर्थ्य बोकेको यस भाइरसले नेपालजस्तो अल्पविकसित देशलाई आपतमा नपार्ने प्रश्न नै छैन ।
नेपालको चुनौती यो छ कि सरकारी स्तरमा हामीले कोरोना भाइरससित जुध्न गम्भीर तयारी केही पनि गरेका छैनौँ । काठमाडौं उपत्यकामा वा देशको कुनै पनि शहरमा सय/दुई सय मानिसलाई यो रोग लाग्यो भने हामीले पूरै शहर लक्ड डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
लाखौँ मानिसलाई एकै पटक घरघरमा क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने हुन्छ । यातायात र बजार दुवै बन्द हुन्छ तथापि उनीहरूलाई त्यसबेला स्वस्थ खानेकुरा र स्वच्छ पानी आवश्यक मात्रामा धेरै दिनसम्म उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । बिरामी र सम्भावित बिरामीलाई हरेक शहरमा अस्पतालमा आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने हुन्छ ।
उनीहरूको र्‍याल र खकार जाँँच्ने प्रयोगशाला तथा प्राविधिक मुलुकभर पर्याप्त संख्यामा हुनुपर्ने हुन्छ । कोरोना भाइरस लागेका बिरामीलाई उपचार गर्नका लागि ज्यान माया मारेर देशभर जान तयार दक्ष स्वास्थ्यकर्मीहरू पर्याप्त संख्यामा तयार राख्नुपर्ने हुन्छ ।
यी सबै कुरा गर्न धेरै ठूलो स्रोत, साधन चाहिन्छ । सशक्त संयन्त्र चाहिन्छ । के त्यो प्रतिकूल स्थितिलाई बुद्धिमत्तापूर्वक सम्हाल्ने तयारी हामीले गरेका छौँ त ? छातीमा हात राखेर भन्ने हो भने भन्न कर लाग्छ– गरेका छैनौँ । हामी काम कम, गफ ज्यादा गरेर बसेका छौँ ।
महामारी घण्टी बजाउँदै सूचना दिएर आउँदैन । त्यो त अपर्झट तयारी गर्ने कुनै समय नै नदिएर निर्मम ढंगले आउँछ । धन्न, चीन र अन्य देशको महामारीले हामीलाई विभिन्न अनुभव सिक्ने तथा तयारी गर्ने अवसर र समय दुवै प्राप्त भएको छ । तर, कोरोना भाइरस त अब जस्केलो छेउमै पदार्पण गरिसकेको छ ।
न त्यो थाहै नदिएर आई पो सक्यो कि ? किनकि हाम्रा सीमा खुला छन् र विमानस्थल भगवान् भरोसे ढंगले अव्यवस्थित छन् ? तर, अहिलेसम्ममा हाम्रो तयारी भने दिनको १० हजार मास्क उत्पादन र केही दर्जन आइसोलेसन वार्डको मात्र देखिन्छ ।
यो त सिंहको शिकारका लागि केवल झिँगा मार्ने तयारीजस्तै भएको छ । कोरोना भाइरस आउनु त्यति ठूलो जोखिम होइन, त्यो जहाँतहीँ आएको छ, नेपालमा पनि आउनेछ नै । समय पाउँदापाउँदै त्यससित जुध्ने तयारी गतिलो ढंगले नहुनुचाहिँ ठूलो जोखिम र लापर्बाही भएको छ ।
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणविरुद्ध लड्न जनचेतना र जागरणकोे धेरै ठूलो महत्त्व हुन्छ । कोरोना भाइरसको महामारीको बेला के गर्ने, के नगर्ने ? के खाने, के नखाने ? यो लाग्नुअघि जोगिनका लागि के गर्नु ठीक हुने ? लागिसकेपछि निको हुनका लागि के गर्नु सर्वश्रेष्ठ हुने ? यीसम्बन्धी आधिकारिक सूचनाहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट तथा आधिकारिक सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट अहिलेदेखि नै जारी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आधिकारिक सरकारी सूचनाको अभावमा अहिले सामाजिक सञ्जालबाट जथाभावी सूचनाहरू जारी भएका छन् । ती सूचना यथार्थपरक नभएमा त्यसैले धेरैको ज्यान अनाहकमा लिन सक्छ । चीनमै त्यस्तो भयो ।
नेपालभरका सारा नेपालीको संयुक्त बुद्धिमानी, एकता र ऊर्जा प्रयोग गरियो भने कोरोना भाइरस मात्र होइन, जेसित पनि नेपालले लड्न सक्छ ।
भारतले गरेको नाकाबन्दी हामीले त्यही उपायबाट लड्यौँ । चीनबाट १ सय ७५ विद्यार्थी ल्याउँदा नेपाल सरकारले ढिलै भए पनि राम्रै तयारी गर्‍यो । त्यो चुनौती नेपालले राम्रैसित सामना गर्‍यो । त्यसैले कोरोना भाइरस आउँदैमा हामी आत्तिनु पर्दैन तर तयारी भने अहिलेदेखि नै गतिलोसित गर्नु आवश्यक छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, २९ फागुन २०७६, ०६:३५:००
चीन–भारतबीच होला त भीषण युद्ध ?